Manao hetsika fanoherana ny fakàna an-keriny sy ny famonoana azy ireo ny vehivavy Meksikana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Marsa 2019 6:31 GMT
Vakio amin'ny teny English, Deutsch, Ελληνικά, Français, русский, Nederlands, Español
Famoriam-bahoaka tao Zocalo, tanandehiben'i Meksika tamin'ny 2 Febroary. Saripikan'i Jer Clarke , nahazoana alalana.
Ny 2 Febroary 2019, nameno ny araben'ny tanandehiben'i Meksika sy ny tambajotra sosialy ireo vehivavy Meksikana niaraka tamin'ny hiaka sy tenirohy toy ny #VivasNosQueremos (tianay ho velona izahay), # NiUnaMás (tsy tokony hisy vehivavy iray hafa intsony), ary #NoEstamosSolas (tsy irery izahay) ho fanoherana ny antontanisa mampalahelo mampiseho ny herisetra atao amin'ny vehivavy ao amin'ny fireneny. Vehivavy sivy eo ho eo no maty isan'andro ao Meksika tamin'ny taona 2018, araka ny Vaomieram-pirenena misahana ny Zon'olombelona.
Olona miisa 4.000 eo ho eo no nivory teo amin'ny Monumento a la Madre ary nanao diabe nankany Zócalo any an-drenivohitr'i Meksika. Ny alina talohan'io, vehivavy an-jatony no nandray anjara tamin'ny fandehanana am-bisikileta tany amin'ireo tanàndehibe Meksikana miisa 13 samihafa – tao an-drenivohitra fotsiny no nahitana ny mpitaingina bisikileta efa ho 200 – ho an'ny Rodada ho aina sy fahafahan'ny vehivavy .
Niseho ny fihetsiketsehana taorian'ny fanadihadiana nataon'ny gazety El País izay nanambara fa olona miisa 153, vehivavy ny ankamaroany no nalaina an-keriny tanaty metro tao an-tanandehiben'i Meksika tao anatin'ny efa-taona. Mitaky ny famaranana ny famonoana vehivavy ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny fametrahan'ny manampahefana fepetra fiarovana azo antoka ho an'ny vehivavy eny amin'ny rafitra fitateram-bahoaka .
Nanatrika ny fihetsiketsehana tamin'ny 2 Febroary tao an-tanàndehiben'i Meksika ny mpandray anjara ato amin'ny Global Voices, Jer Clarke ary nanatontosa ity lahatsary ity :
Narahana tao amin'ny tambajotra sosialy ny famoriam-bahoaka ary nankalazaina tamin'ny tenirohy toy ny #LaNocheEsNuestra (Anay ny alina) sy ny #LaCalleEsNuestra (Anay ny arabe).
Mampiseho ny vehivavy mihiaka hoe “aoka izay, tsy mila vehivavy vonoina iray hafa intsony” nandritra ny fitaingenana bisikileta ny horonantsary iray nanaovan'i Ruido en la Red sioka:
Misy ny hetsi-panoherana iray hafa izay kasaina hatao amin'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy amin'ny 8 Martsa.
“Androany, nitranga tamiko izany.”
Niteraka fanafintohinana ho an'ny maro tao amin'ny aterineto nanomboka tamin'ny fotoana nivoahany ny volana Janoary 2019 ilay fitantarana tao amin'ny El País momba ny fakàna an-keriny.
Nanambara ireo fomba mampivarahontsana samihafa ny fijoroana vavolombelona izay nahitana ny fomba fakana an-keriny ireo vehivavy any anaty metro – ary ny tsy firaharahian'ny manodidina zary manampy ireo mpanafika.
Tao amin'ny Facebook, nanoritsoritra ny zavatra niainany tamin'ny fitsoahana ny fakana an-keriny i Eunice Alonso:
Eny, nitranga tamiko izany androany .
Fotoana vitsy lasa izay raha tao amin'ny fiantsonan'ny metro Boulevard puerto aéreo aho, niandry ny fiaran-dalambiko dia nisy tovolahy teo ho eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 25 taona teo nijoro tena teo akaikiko teo. Tsapako fa nanisy zavatra tao an-damosiko izy […] Tamin'ny voalohany, noheveriko fa hanendaka ahy izy, saingy nilaza izy avy eo hoe “araho aho, ary rehefa mahita fiara miloko fotsy ianao, dia midira ao anatiny, ary raha misy olona manontany anao dia ilazao fa Uber anao io”. Nangovitra aho ary nanomboka natahotra mafy. Nanomboka nitomany aho. Avy eo, nisy ramatoa iray (tsy fantatro akory ny anarany ) nanontany ahy hoe: “Fa maninona ianao?”, Ary niantsoantso izy hoe “may! may!” rehefa tsy afaka namaly aho. Nanomboka nijery anay ny olona, ​​avy eo dia nisy polisy nanatona, ary nandositra ilay lehilahy [izay nihazona ahy].
Nampiasa ny paikady izay natolotr'ireo manam-pahaizana manokana ilay vehivavy ato amin'ity tantara ity: hiantsoantso ny teny toy ny “afo” na “horohorontany” rehefa mangataka fanampiana mba hampifantoka ny mason'ny mpandalo sy ny mpitandro filaminana nefa tsy mampiharihary ilay mpanafika mivantana (satria mety hiteraka fanoherana mahery vaika avy aminy izany).
Namorona ny tobin-dahatahiry ifarimbonana ho fanehoana an-tsarintany ny zava-nitranga tahaka ny iray etsy ambony tao amin'ny fiantsonan'ny metro tao Meksika ny vondron'asa fanaovan-gazety fanao lahatahiry Serendipia DATA .
Nahangona fitantarana miisa 210 momba ny fakana an-keriny tao an-tanàndehiben'i Mexico sy tao amin'ny fanjakan'i Meksika ireo mpikatroka. Azonao jerena [ny fijoroana vavolombelona amin'ny antsipiriany] ao amin'ity sarintany ity.
Nisy ezaka mitovy amin'izany natomboky ny fantsom-pahitalavitra an-tserasera Rompe Viento izay miorina amin'ny lahatahiry nangonin'ny mpisera Facebook .
Ny 1 Febroary, nihaona tamin'ireo niharam-boina, ny fianakaviany ary ireo vondron'ny fiarahamonim-pirenena ny manampahefana ao an-tanandehiben'i Mexico mba hiara-hamolavola drafitra hiadiana amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy eny an-kalamanjana.
Nanolotra fepetra ny manampahefana toy ny fametrahana vondrona avy ao amin'ny biraon'ny mpampanoa lalàna mifindrafindra natao manokana hanampiana ireo vehivavy niharan'ny herisetra rehefa mampiasa ny fitateram-bahoaka. Nampanantena ihany koa ireo manampahefana fa hanatsara ny fahazavan'ny jiro eny amin'ny manodidina ny fiantsonan'ny metro ary hanamafy ny fanaraha-maso.
Saingy maro no mihevitra fa tsy ampy izany. Any Meksika, maherin'ny 90 isanjaton'ny heloka bevava no tsy voatatitra noho ny tsy fisian'ny fitokisana manampahefana. Maro amin'ireo niharam-boina no matahotra valifaty, na matahotra noho ny fisalasalan'ny manampahefana momba ny zavatra niseho taminy.
Hetsi-panoherana tamin'ny 2 Febroary tao an-tanandehiben'i Mexico. Saripikan'i Jer Clarke, nahazoana alalana.
Toa nahitam-bokany ny tsindry ataon'ny olom-pirenena satria mba nitombo fara-faharatsiny ny isan'ireo fitarainana avy amin'ireo vehivavy voatafika teny amin'ny rafitra fitateram-bahoaka tao an-drenivohitra. Noho izany, afaka nanoritsoritra ny endrikendriky ny zava-niseho tamin'ireo niharam-boina ireo manampahefana .